गरे के हुदैँन ? एउटा गतिलो उदाहरण रायो साग बेचेर एक लाख आम्दानी — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » अार्थिक, कृषि, मुख्य समाचार, साहित्य, स्वास्थ्य → गरे के हुदैँन ? एउटा गतिलो उदाहरण रायो साग बेचेर एक लाख आम्दानी
गरे के हुदैँन ? एउटा गतिलो उदाहरण रायो साग बेचेर एक लाख आम्दानी
March 21, 2016६८७ पटक
बागलुङ, ८ चैत्र । साग बेचेर बागलङ जिल्लाकी एक महिलाले मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएकी छिन् । जिल्लाको रायडाँडा–४ की ५५ वर्षीया पवित्रा थापाले ‘रायो’ साग बेचेर वार्षिक एक लाख कमाई गर्दै आएकी छन् ।
थापाले मुख्य याममा दैनिक ५० किलोसम्म साग बेच्ने गर्छिन । आफ्नै सीप र अनुभवबाट साग उत्पादन गर्दै आएकी थापालाई गाउँमा सडक पुगेपछि व्यावसायिक बन्न सजिलो भएको हो । सदरमुकामदेखि रायडाँडा जोड्ने कृषि सडक बनेपछि गाउँको कृषि उत्पादनले बजार पाएको छ । ‘बजारमा सागको माग छ, रायडाँडाको साग भनेपछि सबैको रोजाइमा पर्छ’, –थापाले भनिन । ‘पहिले–पहिले साग त्यत्तिकै कुहिएर जान्थ्यो, गाईबस्तुलाई खुवाउनुपथ्र्यो, सिन्की बनाउने चलन थियो, अहिले बजारमा बिक्री हुन्छ ।’ अहिले साग प्रतिकिलो ३५ देखि ४० सम्ममा बिक्री हुने गरेको उनको भनाई छ ।
थापाले घर आसपासका बारीमा व्यावसायिक रुपमा सागको खेती गर्दै आएकी छन् । सागसँगै थापाले अन्य तरकारी बाली पनि उत्पादन गर्दै आएकी छन् । काउली, बन्दागोभी, गाजर, धनियाँ पनि बेच्छिन । थापामात्रै नभएर उनको परिवारले पनि खेतीपातीमा सघाउँदै आएको छ । उनका ६० वर्षीय श्रीमान् लक्ष्मण थापा र छोराछोरीसमेत कृषि उत्पादनमा खट्ने गरेका छन् । उनी व्यावसायिक बाख्रापालनलाई अघि बढाउने योजनामा छिन् ।
लघुउद्यम विकास कार्यक्रमको सानो सहायताबाहेक अन्य कुनै निकायबाट सहयोग नपाएको थापाको गुनासो छ । ‘आर्थिक स्रोत जुटेमा प्लास्टिक घरमा तरकारीखेती गर्ने लक्ष्य छ’ उनले भनिन् । रायडाँडाका अन्य किसानले पनि व्यावसायिक सागखेती गर्दै आएका छन् । यहाँको साग जैविक र स्वादिलो हुने हुँदा उपभोक्ताको पनि रोजाइमा पर्ने गरेको छ । अन्य तरकारी बालीको तुलनामा सागखेतीलाई त्यहाँका किसानले प्राथमिकता दिने गरेका छन् । रासस